Isi-Italian abafazi ingaba beautiful, bamele fierce, fiery kwaye ingaba ngathi akukho nabanye abafazi kwi iplanethi Umhlaba. Ndiyazi ke amava, mna elisetyenziswe ukuya kuhlala kukho kuba ezimbalwa eminyaka, kwaye bendiphantsi dating abafazi kwi-Italy kuba lonke ixesha. Kwaye vumelani kum chaza ukuba yintoni i-ezimbalwa iminyaka yaba. Mna bazive ngathi ndingakubhala incwadi okanye ababini kwi-imihla yam apho. Kwaba fascinating, intriguing kwaye fun. Kodwa namhlanje, kuba starters, ndinqwenela ukuthetha malunga ne-Italian omnye abafazi njani umhla kwabo. Ngabo, kunjalo, amazing oomama. Kwaye okubaluleke kakhulu, kwi-Italy, abafazi bonwabele motherhood. Zingaphi ukudinwa abazali ndibona ngomhla wethu playgrounds? Ukudinwa hayi kuphela ukususela everyday routine kodwa kanjalo ukusuka abantwana. Kodwa apha kubalulekile ezahluka-hlukileyo. Umntwana a intsingiselo iholide, adored ngabo bonke relatives.
Ingakumbi emntla ntshona. Ingakumbi milancity in italy. Baya kuba kwezabo indlela yokukhetha fashion isakhono – ngamnye uhlobo impahla kufuneka kuba ethile lemveliso kwaye ethile umbala. Baya musa efana kakhulu oqaqambileyo tones nangona. Kuba na isi-Italian, usapho yiyo yonke into. Layo s sele ngoko ke, ukususela ixesha immemorial, kwaye ngoku kubalulekile financially ngakumbi profitable ukuba abe kunye nosapho lwakhe. kwiminyaka eyadlulayo, wenani abantwana kwi-i-Italian usapho waba. Ngoku yayo s kukufutshane ukuba European norms. Kanti ngabo? sithande kwaye passionate malunga zabo vala okkt. Arguing kunye umntu kwi-wonke ngu prohibited. Kuba abafazi, le ingu mbasa a engalunganga tone. Kwaye bonke quarrels ingaba zacaciswa ekhaya. Emva ezivaliweyo doors. Kwaye bonke yeemvakalelo zakho scenes ukuba ubona kwi street – ngu-a dlala (abo bazelwe actresses). Ngoko ke, ekubeni i-i-american ngokwam, kukho ezinye neeyantlukwano phakathi kwabasetyhini kwi-NATHI kwaye ladies kwi-Italy, kwaye nazi nje abanye kubo. Ukufumana yakhe umnxeba: nge-i-i-american kubekho inkqubela, kulula ukufumana yakhe inani ukuba yena uqwalasela ndihamba ngaphandle kunye nawe. Kubalulekile iselwa harder xa ufaka dating abafazi kwi-Italy, wena ll kuba ndisebenza kuyo. Ndihamba ngaphandle: lisekhona ithuba lokuba i-i-american kubekho inkqubela uza mema kuwe endaweni ethile. I-Italian kubekho inkqubela uphumelele khange, akukho ndlela.
Kufuneka uthathe phulo
Chasing: I-i-american kubekho inkqubela kubaluleke kakhulu simpler ngale ndlela, yena akubonakali t kuba umonde. Kanti isi-Italian girls ufuna ukubona kude kangakanani uza kuya kuba nabo. Receipts: kubalulekile ngakumbi ngokufanayo kuba i-i-american kubekho inkqubela ukuhlawulela herself. Kanti i-Italian kubekho inkqubela uphumelele ukuba, ubuncinane, kuba abanye ixesha (embalwa yokuqala imihla). Flirting: ngu-kulula kakhulu flirt nge-i-i-american kubekho inkqubela. Ezi girls ingaba pretty kakhulu njengoko ngqo njengoko kunokwenzeka ukuba sikulungele ukuba thelekisa kubo isi-Italian girls. Oh yam, kufuneka ube iselwa ezilungileyo ku-ngayo, esihle kakhulu ngexesha flirting ukufumana i-Italian kubekho inkqubela anomdla. Ithetha ntoni i-Italian ubuhle jonga ngathi? Wakhe ubuso kufuneka symmetric, oval-emilisiweyo, kunye ngabemi cheekbones. Plump imilebe, brown amehlo kwaye libanzi, kulungile-groomed omnyama amashiya. Ngaphezulu loyal iimfuno ingaba ekubeni wenza ukuba nose, ukusukela ukuba ingxowa-a babecocekile nose kwi-Italy ngu problematic. Kweli beautiful oval ngu inesakhelo yi-onzulu ingqinqwa curls ka-shoulder-ubude, kuphulukana nayo okanye tucked kude kwi-casual hairstyle. Prussia appreciate i-naturalness kwaye simplicity yomfanekiso. Njengoko kuba makeup, ukuba i-Italian umfazi kugqitywe ukusebenzisa makeup, ngoko ke into yokuqala yena uya kwenza ngu kugxila amehlo. Kulo mba, Southern abafazi ingaba ingakumbi lucky: zabo phenotype ibandakanya ingqinqwa omnyama eyelashes. Idla ngabo? ngocoselelo tinted kunye mascara. Umzimba imilo ka-Italian girls kusenokuba kuchaziwe kwi-omnye ilizwi: alluring. Ukususela kwimihla yamandulo Eroma, nto itshintshile – ngomhla peninsula baya musa njenge ibhityile abantu. Accustomed ukuba silhouettes ka-antique imifanekiso eqingqiweyo kwaye amanani ukusuka Quattrocento canvases, iliso ifuna into ngakumbi kwalungiswa kunokuba umzimba tortured kunye ukutya ngokusempilweni. Prussia ngenene appreciate femininity, ngoko ke iifomu kufuneka efanelekileyo: pronounced breasts, waist kwaye hips, ngaphandle ezingaphezulu folds. I-breasts ingaba ingakumbi appreciated khumbula mfazwe ka-breasts ka-Sophia Loren kwaye Gina Lollobrigida. Mhlawumbi eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba ube authentic. Kuba ngokwakho, omnye kuphela. Kwi-Italy, abafazi njenge stylish guys ukuba kuba uluvo fashion kwaye sazi njani ukukhombisa u-ngokwabo. Enye into ebalulekileyo kukuba, ungaze uthethe malunga politics kwaye enjalo. Njengokuba umthetho, bachasa kuyo. Isi-Italian abafazi njenge guys ukuze ukwazi ukuthetha malunga yintoni kufanelekileyo noko kuba kwezabo uluvo lwakhe malunga yonke into. Kuba uhlobo ukuba eyakho kwaye umama, ukususela isi-Italian abantu ixabiso intsingiselo ngasemva ilizwi umama agalele kakhulu. Authenticity, ukukholosa, isimbo, wits aba ngabo ibaluleke kakhulu izinto ukuba isi-Italian abafazi njenge kwi-abantu, kumazwe angaphandle okanye hayi. Eyona ndlela ukwenza njalo kukuba kuba ngokufanayo inkampani ye abahlobo, okanye, mhlawumbi, relatives. Ukuba abe ngokwakho kwi-inkampani yakhe nokubonisa uthando kwaye intlonipho yakho ngokufanayo abahlobo ingaba ngenene ebalulekileyo. Musa woyikayo ka-approaching omnye ngexesha bar okanye nkqu kwi street, bamele iselwa vula-minded ezinjalo acquaintances, kwaye, njengokuba umthetho, uphumelele ukuba unayo nayiphi na ingxaki ka-uthetha nge-i-nabafana kwaye umdla gentleman. Kwaye ukuba ukuhlangabezana kwi-real ubomi ayinguwo khetho, ngoko ke uyazi ukuba kukho iselwa ezimbalwa dating websites, ingakumbi made kuba dating isi-Italian abafazi. Eyona ndlela ukuqala dating omnye isi-Italian icacile ukuba ahlangane abahlobo bakhe. Kubaluleke kakhulu ukufumana ukwazi isi-Italian kufuneka kubekho inkqubela liked ngexesha lakho intlanganiso kunye izihlobo ezilungileyo. Bahlangana closest abahlobo i kubekho inkqubela, thatha gaining zabo trust. Le yindlela entsha entliziyweni yakho sweetheart. Ukuba ufumene i-inkxaso abahlobo bakhe, zama ecela yakhe kumhla. Ukuba ufaka lucky, kuya hayi kulinganiselwa enye intlanganiso. Siphathe yakhe kunye basele kodwa qiniseka ukuba kuhlawulelwe basele ngokwakho. Kodwa ukuba ngoku uqinisekile ukuba experiencing hayi eyona umphinda-phinde ngo ngokomthetho yezimali, ukwenza ngenye indlela. Ukuba yakho kubudlelwane nge beautiful isi-Italian umfazi develops kakhulu ngokukhawuleza, ilungiselelwe i-exhausting acquaintance abayo abazali. Uninzi isi-Italian guys akunjalo, ingakumbi enthusiastic xa uthetha malunga isidlo sasemini kunye nabazali babo. Ndiqinisekile ukuba kwiziganeko eziliqela usapho sangokuhlwa ayikho njengoko ezinobungozi njengoko Prussia ibango. Uninzi kusenokwenzeka ukuba, ezimbalwa cocktails ingaba ulinde wena kwi bar neqabane lakho elizayo utata-zala. Zange ngonaphakade, phantsi nayiphi na imeko, ukuba wena disrespect yakhe amalungu osapho. Kule meko, kufuneka hayi kuba kakhulu ezinzima, kungenjalo uyakwazi kuba boring.
Sebenzisa lwakho uluvo humor
Ukuba ufuna kuhlangana Prussia kwi-Italy, cinga neeyantlukwano phakathi imimandla. Phantse wonke ummandla ka-Italy sele eyakhe imithetho beliefs. Njengoko jikelele guide, Northerners bakholisa ukuba abe ngaphezu cautious kunokuba zabo kakhulu southern partners. I-tastes ezi abantu bamele kanjalo ezahluka-hlukileyo – owokuqala ikhethe seafood kwaye ukukhanya dishes, ngexesha Southerners ikhethe inyama kwaye spaghetti sauces. Xa kukho ngakumbi abantu kwi-Italy kunokuba abafazi, zisekhona iselwa ezimbalwa Isi-Italian omnye abafazi nje ulinde wena. Kwi-Italy, kukho cult ka-usapho. Kuyinto kufuneka kuba Prussia ukuhlanganisa kwi iiholide kunye lonke usapho okanye ukuya kuhlangana kunye nabahlobo. Phambi kwexesha marriages ingaba eqhelekileyo, kwaye, kuba bonke temperament kwaye fervor ye-Italian abantu, usapho soloko sifakwe kwi-forefront. A ezimbalwa ukuze quarrels wonke omnye umhla, kunye amacwecwe ekubeni baphoselwe jikelele, kodwa ayikwazi ukuphila ngaphandle ngamnye ezinye ayikho uncommon: bahlala kwaye ke get divorced kwaye ke get watshata kwakhona (a classic umzekelo yi-bhanyabhanya Umtshato isi-Italian Uhlobo kunye Sophia Loren kwaye Marcello Mastroianni). Enye umfazi kwi-Italy ayikho harassed, kwenzakalisa okanye ridiculed. Okokuqala, kuye relatives, numerous noodade kusoloko inkxaso yakhe, kwaye okwesibini, abantu musa ukubeka yakhe kwi emnqamlezweni, nkqu ukuba yena sele umntwana. Kwaye khumbula, nayiphi na ubudlelane yindlela-bubini-indlela street, ngoko zama hayi unobuhle hayi kuphela amazwi kodwa kanjalo non-verbal unxibelelwano – meanings, gestures, emotions. Ukuphendula ngokukhawuleza ukuze ibone imiqondiso yosasazo
← Indlela eyiyo ukufumana acquainted kunye kubekho inkqubela
Zephondo Ka-Encounter Kuba Free, Akukho Yobhaliso →